Tag: sehatra mailaka | Martech Zone
Tag: sehatra mailaka
Ny vidin'ny fandrefesana ny isa amin'ny vidin'ny boaty
Talata, Febroary 2, 2016 Alahady 15 Janoary 2017 Douglas Karr
Raha manana fitoeram-pako any amin'ny toerana misy azy ireo ny Sampan-draharahan'ny Paositra ary isaky ny mahita sombin-kaonty mandalo izy ireo dia manipy azy rehetra any anaty fako, ho antsoinao ve izany fa natolotra? Tsia mazava ho azy! Hafahafa ihany, na izany aza, ao amin'ny sehatry ny marketing amin'ny mailaka izay mailaka rehetra atolotra ao amin'ny folder spam dia isaina ho natolotra! Vokatr'izany, ireo mpamatsy mailaka dia mametraka ny isa azony omena toy ny hoe zavatra tokony hireharehana
Entana: Manova mpivarotra mailaka nefa tsy manova ny UI-nao!
Zoma 15 Novambra 2013 Zoma 15 Novambra 2013 Douglas Karr
Fony aho niasa tamina mpanome tolotra mailaka ho mpitantana ny vokatra dia nahita drafitra iray izay nahatonga ahy hanana endrika hafahafa vitsivitsy aho. Tamin'ny fotoana nanananay mpamorona vitsivitsy niasa tamin'ny API anay isan'andro ary nanana am-polony maro izahay izay niasa tamin'ny fampifanarahan'ny mpampiasa anay. Ny interface user dia tsipika kaody an-tapitrisany ary mitazona ny latabatra fanohananay sy ny fitantanana kaonty ho be tontolo andro. Mifanohitra amin'izany, ny API anay